विक्रम मेला, नयाँ प्रोजेक्ट र स्थायी लाइसेन्स | चितवन पोष्ट दैनिक
विक्रम मेला, नयाँ प्रोजेक्ट र स्थायी लाइसेन्स
२०७० चैत्र १५, शनिबार ०१:५९ गते
यो वर्षको मैजारो हुने बेला विक्रमबाबा मेलाले चितवनलाई तताएकोे छ । त्यसो त, चैत मासे खडेरीमा जल, जमिन र जङ्गलसमेत सुख्खा, उराठ र उजाड बनिरहेको छ । मेला भर्न खडेरीको प्रवाह नगरी भक्तजनहरुको ताँती लाग्न थालेको छ । बाटोघाटो, पुलपुलेसा पहेँलपुर भइसकेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा मेला भर्न विभिन्न जिल्लाबाट भक्त–भक्तिनीहरुको ओइरो लागेको छ । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा सुरू भएको यो कुम्भमेलामा भक्तजनले १५ दिनसम्म मज्जैले धूलो उडाउने छन् । चैते दसैँको यस मेलामा मान्छेको भीडभन्दा खासै रमाइलो देख्न पाइन्न । तर, बाबाको दर्शन गर्न नपाउने भक्तजनहरु पछुताउने छन् । मेला भन्नासाथ यसै पनि मान्छेहरुको भीड, कोलाहल र घुँइचोको समिश्रण रुप हो । मेलामा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका लागि कमाइ गर्ने राम्रो अवसर भए पनि भक्तजनका लागि लाइन लागेर पूजा गर्ने र धूलो खाएर फर्किने मात्र हो ।
मेला भर्न आउने भक्तजनहरुमा अगाध आस्था र विश्वासचाहिँ यो छ कि बाबाको दर्शन गरेपछि अर्थात् कसराको ब्यारेकभित्र अवस्थित एउटा प्राचीन रुखको फेद या ढुङ्गामा पूजा गरेपछि मनोकांक्षा पूरा हुन्छ । सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्ति हुन्छ । सन्तान हुनेलाई सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । बाबाको दर्शन गरेपछि अद्भुत शक्ति प्राप्त हुन्छ, त्यही शक्तिको अनुकम्पाले भक्तजनले चिताएको कामना पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बाबाको दर्शनपश्चात् प्रेमको अनुभूति नै नभएकालाई प्रेम पलाएर आउँछ । कामवासनाप्रति इच्छा नहुनेलाई कामशक्ति बढ्छ । जोडीविहीनलाई तत्काल जोडीको बन्दोबस्त हुन्छ । बिहे गर्न कत्ति मन नलाग्नेहरुलाई अरुका जोडी देखेर ईष्र्या लागेर चाँडै घरजम गर्ने इच्छा जाग्छ । यी सबै विक्रमबाबाको दैवी चमत्कार हो ।
बाबाको दर्शन गरेपछि केही कुराको अभाव हुँदैन । दर्शन गर्ने इच्छा भए बाबाले आफैँ बोलाउनुहुन्छ । यसका लागि बाबाको दर्शनअघि र दर्शनका बेलामात्र शुद्ध भए पुग्छ । बाबाले सबैलाई एकनासले हेर्नुहुन्छ । आस्तिक, नास्तिक, शाकाहारी, मांसाहारी जोसुकै हुन्, बाबाले उत्तिकै मह¤व दिनुहुन्छ । भर्खरै बैँस अंकुराउन लागेकालाई बाबाले कुरकुरे बैँस भरिदिनुहुन्छ । बैँसले मात्तिएकालाई ‘सर्भिसिङ’ गरिदिनुहुन्छ । बैँस रित्तिएकालाई पनि ‘रिकन्डिसन’मा ल्याइदिनुहुन्छ । त्यसैले, बाबाको दर्शनका लागि उमेरको कुनै हदबन्दी छैन । वर्ण, लिङ्ग र जातभातप्रति बाबालाई कत्ति मतलब छैन । जोसँग जे छ, त्यो कायम राख्दै नभएको कुरा थप गरिदिनुहुन्छ ।
केही वर्षअघि बाबाको दर्शन गर्न यो भोगी पनि कसरा हान्निएको थियो । तर, बाबाले मेरो कुरा विश्वास मानेनछन् । ‘बाबा, कालीसँग मेरो छिट्टै बिहे जुरोस्’ भनेर मैले भाकलसमेत गरेको थिएँ । बाबा रिसाएर गोरीसँग पो बिहेको लगन जुराइदिए । तैपनि, बाबासँग केही गुनासो रहेन, गोरीलाई नै काली मानेर घरजम गरियो । तर, बाबा मसँग किन रिसाएका रहेछन् भन्ने चुरो कुरो त पछिमात्रै थाहा भयो । कुरा के रहेछ भने, बाबाले कालीमात्रै मागेको भएर गोरीसँग सम्बन्ध जुराइदिएका रहेछन् । एकदिन बाबाले सपनामा आएर भने, ‘‘तैले बिहे गर्ने कालीसँगै दर्शन गर्न आएको भए म त्यही दिन तेरो लगनगाँठो जुराइदिन्थेँ । तँ एक्लै आएर गल्ती गरिस्, मैले तेरो भनिएकी कालीलाई ध्यान–दृष्टिले हेर्दा अर्कैसँग दर्शन गर्न आएको पाएँ । र, तैले बर माग्नुअघि नै अर्कैले कालीसँग बर मागिसकेको थियो । जसलाई मागे पनि बाबाले दिने बर एउटालाई एउटैमात्र हो । त्यसैले अरु काली देखेर तेरो दिलवालीको याद नआओस् भनेर गोरी जुराइदिएका हुँ चिन्ता नमान् ।’’
बाबाको कुरा नमान्ने को होला र ? मान्दिनँ भनेर पनि के गर्नु ? बाबाप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । बाबाको दर्शन गर्न जाने नै भए, कोही पनि एक्लै नजान मेरो अनुरोध छ । आफूले वर माग्ने व्यक्तिका लागि अर्कैले मागिसकेको पनि हुनसक्छ । जोडी नचाहिनेले ‘बाबा मलाई सधैँ तरूनो–तरूनी बनाइदेऊ’ भनेर मागे पनि हुन्छ । बाबाले उधारो आशिष त कसैलाई पनि दिदँैनन् । अझ नयाँ प्रोजेक्टवालाहरुलाई त यस्तो धार्मिक क्षेत्रमा जानमात्र सके पनि फलिफापै फलिफाप हुन्छ । पाप गरेको भए पखालिन्छ । धर्म गरेको भए धर्मात्मी होइन्छ । बाबाले सबैलाई हेर्ने आँखा एउटै हो । नयाँ प्रोजेक्टको कुरा आइहाल्यो । प्रसङ्ग आएपछि यस्ता प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्नु अन्यथा नहोला । नेपालमा सञ्चालित जुनसुकै प्रोजेक्टको एउटा न एउटा मिसन त भइहाल्छ । कुनैले राजनीति, कुनैले धर्म, त कुनैले पेसाकर्मीसँग सरोकार राख्छन् । जुनसुकै प्रोजेक्ट भए पनि त्यो सेवामुखी, नाफामुखी र उद्देश्यमुखी नै हुन्छ ।
यहाँ उल्लेख गर्न लागेको प्रोजेक्टचाहिँ अलि फरक छ । अहिले वेश्यावृत्तिमा लागेकाहरुले ‘प्रोजेक्ट’ लाई नयाँ हतियार बनाउँदा रहेछन् । वेश्यावृत्तिलाई परिवर्तित शब्दानुसार देह व्यापार भनिनु पर्ने हो । चलनचल्तीको भाषामा यौन पेसा पनि भनिँदो हो । जे भनिए पनि शब्दले केही हुने होइन । त्यसैले यौनकर्मीहरुले चित्त पित्तजत्रो बनाएर संकीर्ण सोचाइ राख्नु जरूरी छैन । घरपरिवार, इष्टमित्र या साथीसँगीबाट बच्न पनि नयाँ प्रोजेक्टको फर्मुला प्रयोग गरिएको होला । घर छाडेर रातविरात हिँडेपछि जसले पनि प्रश्न सोधिहाल्छ– कहाँ काम गर्छौ ? अनि मन अमिलो बनाएर भनिदिनु नै जाती हुन्छ– प्रोजेक्टमा काम गर्छु । यस्तो बेलामा अमेरिकी, युरोपेली वा नाम नसुनेको प्रोजेक्टकै नाम फ्याट्ट भनिदिए नपत्याउने को हुन्छ र ? कुन पोस्टमा काम गर्छौ भनेर कोही मूर्खले सोध्न भ्याइहालेछ भने ‘पब्लिक रिलेसन अफिसर’ भनिदिए भो, ‘पब्लिक भोलेन्टिएर’ भनेर रूखो उत्तर दिए पनि भो । व्यक्ति र स्थानअनुसार अफिस सेक्रेटरी, प्रोगाम म्यानेजर, फिल्ड को–अर्डिनेटर जे–जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही भनिदिए पनि हुन्छ । यसबाहेक पनि हुन सक्छन्, आकर्षक पोस्टहरु ।
प्रोजेक्टवालाहरुले त स्टुडेन्ट आइडी कार्ड बनाएर ‘स्टुडेन्ट पर्सनालिटी’ पनि देखाउँछन् रे । नाम चलेको बैंकमा जागिर खान्छु, नर्सिङ पढ्छु, ब्युटीसियन तालिम लिँदैछु भनेर ‘कस्ट्ुमर’ आकर्षित गर्नेहरुको ‘आइडिया’लाई पनि मान्नै पर्छ । साथमा, डायरी, कलम र क्यामेरासमेत बोकेर हिँडेपछि पुलिसले पनि हत्तपत्त समाउने साहस गर्दैन रे । कार्य क्षेत्रमा प्रहरीसँग भिडन्त हुने स्थिति आयो भने रिपोर्टरको हतियार प्रदर्शन गरेपछि सजिलै बच्न सकिन्छ रे । यो प्रोजेक्टमा त रिपोर्टरकोे नामैले इज्जत धानिँदोरहेछ गाँठे ? थाहा छैन, अव नयाँ प्रोजेक्टका कति पब्लिक रिलेसन अफिसरहरुले ‘प्रेस पास’ लिने हुन् ? अनि, कति ‘मिडिया हाउस’मा छिर्ने हुन् ? कति जर्नालिस्टहरुको मन भरङ्ग हुने हो । त्यसपछि त यो पेसाको नामै फेरिन बेर छैन ।
कलेज युनिफार्मले पनि प्रोजेक्टवालालाई ठूलै सहयोग पु¥याउने रहेछ । नाम चलेका कलेज तथा उच्च माविसँग म्याच गर्ने दुई–चार जोर युनिफर्म सिलाएर के नै बिग्रने हो र ? बिग्रिए सम्बन्धित कलेजको रेपुटेसन बिग्रने न हो । बिहान कलेज जान्छु भनेर बिहानको कर्म गरे भो, दिउँसो फिल्डमा जान्छु भनेर फिल्डमै जव पूरा गरे भो र आज राति प्रोजेक्टको पार्टी छ भनेर ‘होल नाइट’ काम सम्पन्न गरे भो ।
केही महिनाअघि पाहुना घरमा फलानो कलेज ड्रेसमा युवतीहरु पढाइ भइरहेकै बेला प्रवेश गरे भन्ने ‘हट न्यूज’ सुनिएको थियो । त्यो पनि प्रोजेक्टवालाकै करामत हो वा कलेजवाला नै हुन्, प्रहरी नै जानून् । केही महिनाअघि पूर्वी नेपालका एक भलादमीले पूरै हवेली भाडामा लिएर दर्जन बढी यौवनाहरुलाई प्रोजेक्टमा जागिर लगाइदिएको मनतातो हल्ला सुनिएको थियो । नयाँ प्रोजेक्टको ठेकेदारकोे नित्यकर्म नै सेवाग्राहीको अनुरोधअनुसार ‘ट्रान्सपोर्ट’ सेवा प्रदान गर्ने थियो । महिलालाई यौनकर्ममा लगाएर उसले आफ्नो वृत्ति चलाउने गरेको रहस्य पत्ता लागेको थियो । सेवाग्राहीसँग रकमको डिलिङ, यातायातको प्रबन्ध र बसोबासको व्यवस्था गरेर दर्जनौँ युवतीलाई नयाँ प्रोजेक्टमा अनुबन्धित गर्ने गिरोहले आफ्नो व्यवसाय सधैँ यसरी नै धानिरहने हुन या विकल्पको पनि खोजी भइरहेछ बाबा जाने… ।
मेलामा नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्ने वा ‘इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिस’ चलाउनेहरुको पनि बिगबिगी रहने निश्चित छ । प्रोजेक्टको कन्ट्रयाक्ट थपियोस्, बाबा भनेर भाकल गर्ने पनि त जाँदा हुन् नि बाबाको दर्शन गर्न ? बाबाले ‘लाइसेन्स रिन्यू’ गर्ने देलान् कि खारेज गर्ने सुझाव देलान् ? बाबाकै इच्छा । बाबाले नेपालमा बढिरहेको यस्ता ‘इगिल प्रोजेक्ट’लाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सद्बुद्धि दिए छिट्टै कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने थियो कि ? नयाँ–नयाँ प्रोजेक्टका नाममा यो पेसा यसरी नै सञ्चालन भइरहला कि स्थायी लाइसेन्स पनि चाहिएला ? नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले जग्गा नपाएर धरधरी रोइरहेछ । प्रोजेक्टको कम्प्लेक्स निर्माण हुने नै भयो भने जग्गादाताहरु तँछाडमछाड गरेर म दान गर्छु भनेर अघि सर्दा हुन् । अनि, त्यो जग्गादान गर्ने भाग्यमानीले इतिहासमै नाम लेख्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्दो हो, कि कसो ?